BitTorrent dia mandefa ny fampiharana azy manokana hijerena horonantsary an-tserasera | Vaovao momba ny gadget
BitTorrent dia mandefa ny fampiharana azy manokana hijerena horonantsary an-tserasera
Azo antoka rehefa miresaka Bit Torrent Fantatsika rehetra ny karazana programa atrehintsika, izay manampy antsika tokoa amin'ny resaka fizarana sy fisintomana rakitra, na dia amin'ny tranga maro aza dia arovan'ny zon'ny mpamorona, izay mahatonga ny fanaparitahana azy ho tsy ara-dalàna. Anisan'ireo programa rehetra ahafahantsika manao an'io karazana asa io, tsy isalasalana fa, BitTorrent dia iray amin'ireo malaza indrindra ary ampiasain'ny vondrom-piarahamonina iray manontolo.
Amin'izany ao an-tsaina dia tsy maintsy ekeko fa nanaitra ahy indrindra ny hoe ireo tompon'andraikitra amin'ny fivoarany dia nanambara ny fandefasana fangatahana fitaovana Android izay mamela anao hijery horonan-tsary amin'ny Internet nefa tsy mila misintona azy ireo. Miresaka momba izany isika BitTorrentLive, izay efa misy ao amin'ny Google Play, na dia misy fetrany lehibe aza satria tsy mandeha amin'ny fitaovana vitsivitsy fotsiny izy amin'izao.
BitTorrent Live, fampiharana Android hijerena horonantsary mikoriana.
Raha miasa, toy ny client torrent dia mifandray amin'ny alalàn'ny P2P Izy io dia manome antoka fa arakaraka ny maha betsaka ny isan'ny mpampiasa, ny haingana sy ny malama kokoa ny tambajotra no handeha ary ny tsara kokoa amin'ny fampisehoana sy ny fampisehoana ny horonantsary. Amin'izay fotoana izay dia mila mitandrina manokana isika amin'ny asany satria tena tsy mitovy amin'ny mahazatra antsika io. Amin'ity karazana maodely ity, ireo mpampiasa dia ireo izay mizara angona eo anelanelan'ny tambajotran'izy ireo hanatsarana ny sary.
Amin'izao fotoana izao, raha ny zava-niainan'ny tsirairay izay efa nanandrana BitTorrent Live, toa ny rehetra amin'ny teny anglisy ny atiny ary tsy dia malalaka loatra ny tolotra na dia araka ny antenainao aza dia mety hiova izany rehefa manomboka miseho ireo mpampiasa vaovao.
More Information: Bit Torrent
Làlana feno mankany amin'ny lahatsoratra: Vaovao momba ny gadget » General » Software » BitTorrent dia mandefa ny fampiharana azy manokana hijerena horonantsary an-tserasera
Mivoaka amin'ny Internet ny famaritana ny Moto G5
Azo atao izao ny mifehy ny bibikely lavitra noho ny fanovana natao tamin'ny génétique